Archive du 07/03/2012
Miditra amin�ny andro fahatelo amin�ity anio ity ny hetsik�ireo manamboninahitra lefitra, mitaky ny hanafoanana ny tataon-ketra alaina amin�ny tambin-karaman�izy ireo.	Hamaky ny tohiny...	Politique
Dr Rakotomalala Hary
�Ho ripaka eto ny Malagasy. Ampy izay !�
Mikatso ny raharaham-pirenena ankehitriny. Samy manana ny fahitany izany ny rehetra. Anisan�ireny ny Dr Rakotomalala Hary izay manaraka akaiky ny raharaham-pirenena amin�ny maha olom-pirenena feno azy. Nisy ny resaka nifanaovanay taminy.
Malemy tanteraka ny fitondrana tetezamita manoloana ireo fitakiana sy fitokonana miseho lany etsy sy eroa.
Mangina tanteraka ny filoha
Manoloana ny fitakian�ny manamboninahitra lefitra, izay efa manana endrika fikomiana, eo anatrehan�ny fiakaran�ny solika sy ny vidim-piainana amin�ny ankapobeny, ampian�ireo grevy sy fitakiana etsy sy eroa, dia mangina tanteraka tsy naharenesam-peo mihitsy ny filohan�ny tetezamita Andry Rajoelina, na dia mamonjy birao isan�andro eny an-dapa ihany aza.
Pr Ranjeva Raymond
Manelingelina ny FAT ?
Fiantsoana hiatrika fitsarana avy hatrany no niandry an�ny Profesora Ranjeva Raymond taorian�ny nizarany sy ny Firohotan�ny Olom-pirenena ho an�ny fifampihavanana na CCC tarihiny ho fanta-bahoaka ny fandinihana ny fivoaran�ny raharaham-pirenena sy ny alaolana amin�izao krizy mandrendrika ny firenena ary mila hampitolefika ny Malagasy 20 tapitrisa izao, ka nilazany fa �vitantsika ny mamaha ny olana, ny mandresy ny firaviravian-tanana sy ny famoizampo�.
Raharahan�ny ankolafy roa sisa
Rehefa natao ny fandinihana ny zava-misy tato ho ato izay, dia hita fa ankolafy roa ihany sisa, dia ny ankolafy Ravalomanana sy ny ankolafy Rajoelina no mbola manaraka sy mampihatra ny tondrozotra nosoniavina tamin�ny 17 septambra 2011.
Nivory voalohany omaly
Niatrika fivoriana voalohany omaly ireo mpikambana voatendry ao amin�ny Vaomiera mahaleotena misahana ny fifidianana ato anatin�ny tetezamita CENIT.
Tsy maintsy nomena toerana ireo nitolona
Voasoroka ihany ny fikasana hitokona ho an�ireo mpiasan�ny Kaominina Toamasina, noho ny fampidiran�ny PDS Toalina Razafindrabary azy ireo ho tale sy mpitantana vaovao eo anivon�ny Kaominina.
Raharaha Banky Foibe
Andrasana amin�ny zoma ny valin�ny fitorian�ny mpiasa
Raha nandrasana omaly dia mihemotra amin�ny zoma izao ny valin�ny fitorian�ny mpiasan�ny Banky Foibe teny amin�ny filankevi-panjakana ny fanapahan-kevitry ny Tale jeneraly izay nanery ireo mpiasa nitokona hiverina hiasa avy hatrany.
Noho ny hamafin�ny Krizy
Be ireo mivazavaza eny an-dalambe
Trangan-javatra mpiseho matetika tao ho ao teto an-drenivohitra ny fahitana olona tsotra mivazavaza samirery ary mafy dia mafy eny an-dalambe.
Misy farany ny zava-drehetra !
Eny rehetra eny dia mandeha ny adihevitra. Mifampanontany ny olon-tsotra hoe mbola mahita tory ihany ve amin�ny alina, ny filohan�ny tetezamita sy ireo manampahefana tena akaiky azy, ka namboly ny krizy tamin�ny alalan�ny fanonganam-panjakana, telo taona lasa izay ?